ငါတို့ချစ်ခင်ရသော furry သူငယ်ချင်းထံမှခွေးလှေးများကိုခတ်ထားခြင်းနှင့်တူသည်မဟုတ်ပါလော။ စျေးကွက်တွင် ၄ င်းတို့သည်ဆေးဝါးအမျိုးအစား ၄ မျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မည် ပုလဲအဆိုပါ ရေမှုံပက်အဆိုပါ ကော်လာ နှင့် တက်ဘလက် သင့်ရဲ့ VET အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဘာလဲ
ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ ၎င်းသည်သင်သွားသောနေရာများပေါ်တွင်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ခွေးအားမည်သို့နှင်းရည်ဖြုန်းတီးရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်။
ပြင်ပကပ်ပါးများကိုမမြင်ရသောမျက်စိနှင့်မြင်နိုင်ကြပါစို့။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ခွေးလှေးနှင့် tick သိပေမယ့် သွင်းလည်းသူတို့ကိုအဆင်မပြေတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးရန်။ သူတို့ကိုတွန်းလှန်ရန်နှင့်တိုက်ဖျက်ရန်ရေမှုန်ရေမွှားများ၊ ကော်လာများသို့မဟုတ် pipetti များကိုစီမံရန်အကြံပြုသည်။
ရေမှုန်ရေမွှားများ - ထိုအရည်များသည်မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်သို့မဟုတ်နားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရန်တိရိစ္ဆာန်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေမှုန်ရေမွှားကိုအသုံးပြုမည့်အချိန်၌ ဦး ခေါင်းကိုကာကွယ်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ မဟုတ်ရင် လိုအပ်သောအဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
ကော်လာ - ဤဆေးအမျိုးအစားကိုသင်၏လည်ပင်းတစ်ဝိုက်တွင်သမားရိုးကျကော်လာကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်။ ၎င်းတို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ တစ်လ၊ သုံးလမှခြောက်လအထိထိရောက်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သင်သိထားသင့်တာကသင့်မှာခွေးတစ်ကောင်ထက်မကရှိရင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကစားတာကမျိုချလိုက်လို့ရတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် အစာအိမ်နာခြင်းနှင့်အထွေထွေအဆင်မပြေခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်, နှင့် VET အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Pipettes - လည်ပင်း၏နောက်ကျောကို ဦး ခေါင်းနှင့်နောက်ကျောကြားတွင်လျှောက်ထားပါ။ ခွေးကြီးလျှင်အမြီးခြေရင်းသို့နောက်ထပ် ၂-၃ သေးငယ်သောဆေးများသုံးပါ။ တံဆိပ်ပေါ်မူတည်။ သူတို့အကြားထိရောက်သောရှိသည် ၃ နှင့် ၄ လ.
အမှန်တရားကမူတည်ပါတယ်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရကျေးလက်နေတဲ့မြို့မှာနေပြီးဥယျာဉ်တစ်ခုရှိတာကကော်လာ (သို့) ရေမှုန်ရေမွှားတွေထက်ပိုပြီးငါ့ခွေးတွေအတွက် pipetti ပိုထိရောက်တယ်ဆိုတာငါပြောနိုင်ပါတယ်။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၌၎င်းတို့သည်ပြင်ပကပ်ပါးကောင်များမရှိတော့ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးတစ်လကြာအောင်နေမည်ကိုသင်သိသည်။ ကော်လာသို့မဟုတ်မှုတ်ဆေးများသည်အပြင်ဘက်သို့သာလမ်းလျှောက်ရန်သွားသောတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်အခြား furry သတ္တဝါများနှင့်ထိတွေ့မှုသိပ်မရှိသောသူများအတွက် ပို၍ အကြံပြုသည်။
ပြည်တွင်းကပ်ပါးကောင်များကိုခေါ်သည် ပိုးကောင်များထိုသို့သောအဖြစ် toxocara canisအဆိုပါ Diplydium caninum ဖြစ်သည် ဒါမှမဟုတ် glardias ။ ၄ င်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အတွက်သင်ကကုသမှုကိုခံယူရမည့်သင်ခန်းစာသို့ သွား၍ သင့်လျော်သောကုသမှုပေးနိုင်သည် ရည် o တက်ဘလက်.
ဤတိရိစ္ဆာန်များသည်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဥာဏ်ရည်ထက်များစွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးသောအနံ့ရှိသောကြောင့်ထိုဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိချင်ပါ။ မင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်သောက်သောရည်သို့မဟုတ်ကုန်တယ်ဆေးပြားကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာတွင်ရောစပ်ပါမည် (ကစိုထိုင်းဆလျှင်ပိုကောင်း) ။ ဒါကိုသေချာမသိဘဲသူမျိုချလိုက်တာ😉။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » သိချင်စိတ် » ငါ့ခွေး deworm ဘယ်လို
Gos d'Atura Catalàသို့မဟုတ် Catalan သိုးထိန်းခွေးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်